इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा भारत ८ विकेटले विजयी ! - इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा भारत ८ विकेटले विजयी !
इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा भारत ८ विकेटले विजयी !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २९ असार 109 Views
काठमाडौँ, २९ असार । इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा भारत ८ विकेटले विजयी भएको छ । टस हारेर पहिले व्याटिंग गरेको इंग्ल्याण्डले ४९ ओभर ५ बलमा सबै विकेट गुमाएर २ सय ६८ रन बनाएको थियो । मध्यम लक्ष्य पछ्याएको भारतले ४० ओभर १ बलमा मात्रै २ विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गर्यो ।
भारतको जितमा रोहित शर्माले १ सय ३७ रन बनाए भने विराट कोहलीले ७५ रनको योगदान दिए । रोहितले यसअघि ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेटमा पनि शतक बनाएका थिए । इंग्ल्याण्डका मोइन अलि र अदिल रसिदले एक एक विकेट मात्रै लिन सके ।
पहिले व्याटिंग गरेको इंग्ल्याण्डका जोश बटलरले ५३ र बेन स्टोक्सले ५० रन बनाउनुबाहेक अरुले गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन । इंग्ल्याण्डलाई मध्यम अवस्थामै रोक्न कुलदिप यादव एक्लैले ६ विकेट लिए भने उमेश यादवले २ र युज्वेन्द्र चाहलले १ विकेट लिए ।
जितसँगै भारतले तीन खेलको एकदिवसीय श्रृंंखलामा एक शुन्यको अग्रता लिएको छ । यसअघि तीन खेलको ट्वेन्टी ट्वेन्टी श्रृंखला जितेको भारतले इंग्ल्याण्डसँग पाँच वटा टेस्ट क्रिकेट पनि खेल्नेछ ।